ဂျက်စီကာ Preemie ကလေးဟက် PDF ဖိုင်ရယူရန်အပ်ချုပ်စံနမူနာ – အဆိုပါ Tailoress
နေအိမ် / ကလေး / Preemie ကလေး / ဂျက်စီကာ Preemie ကလေးဟက် PDF ဖိုင်ရယူရန်အပ်ချုပ်စံနမူနာ
အဆိုပါထုတ်ကုန်လိုချင်သောစာရင်းထဲမှာထားပြီးဖြစ်ပါသည်! လိုချင်သောစာရင်း Browse
categories: ပစ္စည်းများ, ကလေး, Preemie ကလေး
Three adorable styles in sizes to suit premature babies of gestational age 24 / 26 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 ရက်သတ္တပတ်.
ကို 'လှည်း ADD' ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သင့်ရဲ့လှည်းဖို့ထုတ်ကုန် Add
ခလုတ်ကို '' PayPal ဆက်လက် '' ကိုကလစ်နှိပ်ပါ
သင့်ရဲ့ငွေပေးချေမှုပြည့်စုံသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်, သာမန်အားဖြင့်သာစက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာသည့်, သင်ကငါ့အကောင့်ထဲမှာသင့်ရဲ့အမိန့်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်ရှိရာအဆိုပါTailoress®ပြန် redirected ပါလိမ့်မည် (သငျသညျပြီးသားတဦးတည်းရှိခဲ့သို့မဟုတ်ကုန်ပစ္စည်းမှာတဦးတည်းကိုဖန်တီးရန်ရှေးခယျြခဲ့လျှင်). သင့်အကောင့်ဧရိယာထံမှသင်တို့လည်းသင်၏ဖိုင်များကိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်. ငွေပေးချေမှုအပျေါမှာသငျသညျမြားကိုလညျးမကြာမီသင့်ရဲ့ download link ကိုပါဝင်သောအခြားအီးမေးလ်ဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်သင်သည်သင်၏အမိန့်အသေးစိတျသိစေအီးမေးလ်အကြောင်းကြားစာကိုလက်ခံရရှိပါလိမ့်မယ်.
paypal အင်တာနက်ကျော်ဝယ်ယူတဲ့လုံခြုံပြီးလုံခြုံနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်. သင်Tailoress®ထံမှဝယ်ယူရန်တစ် Paypal အကောင့်မလိုအပ်ပါဘူး.
ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်
ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်
pattern ပိုစတာပုံနှိပ်ဖို့ Adobe Reader ကို အသုံးပြု. ဘယ်အရွယ်အစားစာရွက်ပေါ်တွင်ပုံနှိပ်နိုင်သည့်တစ်ဦး fullscale copyshop PDF ဖိုင်ရယူရန်စာရွက်စာတမ်းအဖြစ်လာ. ဒါ့အပြင် A4 စာမကျြနှာပေါ်သို့ရရှိနိုင်ပါတက်ကျိုးပျက်. လွတ်လပ်သော A4 စာမကျြနှာသငျသညျပုံနှိပ်ပြီးနောက်မှန်ကန်စွာအသီးအသီးစာမျက်နှာ align ကိုကူညီစာမျက်နှာနံပါတ်များနှင့်အမှတ်အသားများရှိ.
Copyshop အရွယ်အစား: 21.5cm x 21cm / A4 စာမကျြနှာ:2/ အမေရိကန်ပေးစာ: 2
Copyshop အရွယ်အစား: 35cm x 21cm / A4 စာမကျြနှာ:4/ အမေရိကန်ပေးစာ: 4
Copyshop အရွယ်အစား: 22cm x 21.5cm / A4 စာမကျြနှာ:2/ အမေရိကန်ပေးစာ: 2
ပုံတွေကိုပုံစံကို download အတွက်ရရှိနိုင်ပါ.
With RIGHT SIDES together, fold the darts. တွယ်အပ်, stitch and trim the seam allowance of the dart.
တွယ်အပ် ,stitch and trim the seam allowances.
ဖြတ်2of the BEANIE HAT pattern pieces for the inner hat.
£ 3.91 စျေးဝယ်ခြင်းထဲသို့ထည့်သည်
£ 3.91 ရွေးချယ်မှုများကို Select လုပ်ပါ
£ 4.03 ရွေးချယ်မှုများကို Select လုပ်ပါ